Tahotra coronavirus :: Razana nalevina maika tetsy Anjanahary • AoRaha
Tahotra coronavirus Razana nalevina maika tetsy Anjanahary
Malahelo ny fianakaviana; mailo tanteraka kosa ny manampahefana. Nihadiana lavaka nandevenana azy faran’izay haingana, tetsy Anjanahary, tamin’ny alin’ny talata 19 mey lasa teo, ny razana lehilahy iray nokasaina haterina tany amin’ny fasan-drazany, tany Faratsiho. Niteraka fanahiana sy fandraisana fepetra hentitra ny fahafatesan’io lehilahy io tany Toamasina. Naiditra eny amin’ny Tanàna Voara eny Andohantapenaka atokamonina mandritra ny efatra ambin’ny folo andro kosa ireo havan-dRatokompokolahy, izay nitondra ny razana.
Narary tao amin’ny hopitaly tany Toamasina io lehilahy io. Namoy ny ainy, tamin’ny alatsinainy lasa teo, izy. Nahazo fahazoan-dalana hitondra ny razana any Faratsiho, toerana nokasaina handevenana azy, ny fianakaviany. Tsy nisy famaritana ny anton’ny fahafatesana kosa ny tao anatin’ny taratasy fahazoan-dalana, araka ny loharanom-baovao.
Niely anefa ny feo momba ny fahavoazan’ity olona namoy ny ainy ity tany Toamasina, saingy tafala tany an-toerana ihany ny fiara marika “Mercedes Sprinter” nitondra ny razana miaraka amin’ny fianakaviana ampolony, ny harivan’ny 19 mey 2020. Niha nitombo ny fanahiana, taorian’ny fandalovan’ireo tany Brickaville. Nanapa-kevitra hisakana ny fiara ny mpitandro filaminana, nanomboka teo.
Fandevenana ary fomba
Taty an-drenivohitra vao azon’ny zandary ilay fiara, rehefa nijanona teny Andohantapenaka, tamin’ny alin’ny talata. Noraràna tsy hihetsika ireo olona tao anatiny. Norarahana ranompanafody ny atin’ny fiara nitondra ny razana. Nentina avy hatrany teny amin’ny Tanàna Voara ireo fianakaviana, taorian’izay. Nitodi-doha nankeny Anjanahary kosa ny fiara nitondra ny razana. Ary fomba tanteraka, toy ny fiarovantena tamin’ny fitafiany hatrany am-paladia ka hatreny an-tampon-doha ireo miaramila sy mpitsabo nifanerasera tamin’ireo fianakaviana sy ny razana, nandritra ny alina tontolo. Tokony tamin’ny 2 ora sy sasany maraina, ny alarobia maraina, vao vita ny fandevenana teny Anjanahary. Tsy misy ny filazana ofisialy, hatreto, na matin’ny aretina hafa na vokatry ny coronavirus tokoa ity lehilahy namoy ny aony tany Toamasina ka nalevina maika teto an-drenivohitra ity.
Fitsoahana fepetra :: Sarona ireo lehilahy sy vehivavy am-polony nitaingina môtô
Halatra :: Tompona môtô voapoizina iaorta